Dawladda Jabuuti oo ku guuleysatay dillaalka mashruuca la dagaalanka Budhcad-badeedda | Berberanews.com
Dawladda Jabuuti oo ku guuleysatay dillaalka mashruuca la dagaalanka Budhcad-badeedda
Jabuuti- (Berberanews)- Dawladda Jabuuti ayaa ku guuleysatay in ay ku qanciso Hayp’adda International Maritime Organization oo ah Hay’ad Qaramada Midoobay u wakiilatay la socdka Marinnada Biyaha in ay dalkeeda ka dhisato xarun sida Machadka oo kale ah oo lagu baranayo ka hortagga hawlgallada Budhcad-badeeddu Badaha ka fuliso.
Dawladda Jabuuti ayaa in muddo ahba wadday hawl ay ku meel-marinayso mashruuc ay ugu magac-dartay Djabouti Code of Conduct oo ay hore uga saxeexday dalal badan oo dunida ku yaal. Heshiis isfaham loogu yeedhay ayaa dhawaan ay Jabuuti la sexeexatay IMO si markaa dhisme Macahadka la dagaalanka Budhcadda ah looga hergeliyo dalka Jabuuti.
Heshiiska oo uu Jabuuti u saxeexay Wasiirka Qalabka iyo Gaadiidka Maxamed Muuse Ibrahim,halka IMO uu u saxeexay Mr Koji Sekimizu oo Hay’adda u qaabbilsan dhanka amniga. Jabuuti ayaa hore u qaadatay mashruuc dalkeeda ay xarumo Ciidan ugaga sameysay dalalka ku hawlan waxa loogu yeedho la dagaalanka argegixisada ee Soomaaliya barhtilmaansada sannadahan danbe.
Budhcad-badeedda Soomaalida ayaa in dhawaydba la hadal hayay in lacagaha ay ka helaan afduubka Maraakiibta in ay dhigtaan Baananka dalka Jabuuti. Waxaanu dalka Jabuuti u muuqdaa mid sannadba sannadka ka dambeeya ka faa’iidaysanaya fursadaha horumar u samayn kara dalka, kuwaasoo la odhan karo waxa uu kaga horreeyaa dalkaasi dalal badan oo Afrikaan ah, waxaana la dareemi karaa in horumarkaas ka muuqan karo dhinac kasta oo laga eego dalka Jamhuuriyadda Jabuuti.